"Tropicana ukwenzela ukungena okuncane kakhulu ikhofi green" ( "Evalar") ngoba kwesisindo: ukubuyekezwa kanye Umgomo we operation
Eminyakeni yamuva zithandwe izidakamizwa elisetshenziselwa ukunciphisa umzimba, equkethe ikhofi green. Kukholakala ukuthi lezi supplements ukudla ukukhuthaza kuyashesha futhi kulula ngokweqile kwesisindo. Kazi ukuthi lokhu izinkampani iqiniso noma nje Stunt emphakathini abafisa ukudayisa imikhiqizo yabo? Ngempumelelo uma, isibonelo, oluhlaza "Evalar" izinqubo okumelwe Coffee, okuyinto libuyekeza zingatholakala ku izinkundla eziningi ezahlukene? Ukuze sicacise lokhu, kubalulekile ukufunda lo mshini wezenzo izidakamizwa wenza kusukela okusanhlamvu ebomvu lo mkhiqizo.
Ingabe ikhofi green ukuze ngehlise umzimba?
Ngokushesha ngifuna uqaphele okulandelayo. Abaningi bacabange ukuthi ikhofi green - uhlobo ahlukene zokuqabuleka ekuseni isiphuzo. Kodwa empeleni isimo Kuthi ezahlukene. Ngempela, kuba ubhontshisi ezivamile unroasted. Umehluko phakathi kwalezi ezimbili yencwajana isiphuzo? Okokuqala, ukunambitheka, iphunga elinamandla, umbala. Futhi abacwaningi bathola ukuthi lapho yokuwugazinga zekhofi wabo zinyamalale chlorogenic acid, okuyinto kuvimbela ukumuncwa glucose emzimbeni. Lokho kuyasiza ukunciphisa isisindo emzimbeni. ENdiya, eholwa uDkt Dzho Vinsona of Sciences of University of eScranton (USA) baqhuba izifundo amalungiselelo equkethe ezikhishwe of green zekhofi. Bakhandwa exhasiwe yinkampani kokukhipha kwabo. Ngesikhathi sokuhlola, kwatholakala ukuthi emasontweni 22 isilinganiso kwesisindo phakathi kwezihloko kwaba 8 kg. Futhi lokhu naphezu kweqiniso lokuthi bamhola ukuphila okuvamile. Yileyo ndlela kungase kutholakale ukusebenza kahle kwale mithi. Ngezansi sibheka Analogue zethu zasekhaya lezi izithasiselo, okungukuthi ikhofi green "Evalar" isisindo ukulahleka, ukubuyekezwa zazo kukhonjisiwe ngezansi.
Izici kwalo mkhiqizo
Cabanga ukuthi lokhu mkhiqizo esahlukile kuzo zonke nabanye abafana naye. Kubalulekile ukuthi izidakamizwa itholakala ifomu tablet. Kubalulekile kwalabo abangamazi bumnandi ebuhlungu zemvelo ikhofi green. Manje kufanele ishiwo ngezithako zawo. Isisekelo sakhe - oluhlaza ikhofi akhiphe. "Evalar" (izibuyekezo besimo sengqondo ezahlukene omuhle kuso) - inkampani, ikhwalithi yezimpahla ukuthi singamethemba. Lokhu kusho kakhulu kunciphisa esesuthi, ikhuthaza okusheshayo kwesisindo. Yiqiniso, kukhulunywa kuwufanele ukuthi uyokwenza okuningi ngempumelelo ngaphezulu uma ulidle, usebenzisa ezinye izindlela zokulungisa izibalo, ezifana yokudla nobungqabavu.
Futhi manje mayelana nendlela yokusebenzisa kahle ikhofi green "Evalar" isisindo ukulahleka. Uphenyo abathengi bathi isembozo kuyindlela yokuthola imiyalelo enemininingwane, esinikela lonke ulwazi kulo muthi. Kuthiwa ukuthatha iphilisi ngaphambi kokudla kufanele kube kabili ngosuku ngamanzi plain. ukusebenzisa ngokugcwele i-course ithatha izinyanga 1-2. Uma kudingeka, kungase kudingeke uphindaphindwe.
Izibuyekezo abesifazane Mkhiqizo
Abaningi abesifazane basutha nesicelo we ekwakhiweni equkethe oluhlaza ikhofi akhiphe. "Evalar" - brand adumile iveza imikhiqizo okusekelwe izithako zemvelo. Lokhu kubangela ingxenye eyengeziwe ukwethenjwa ngale okufakiwe ukudla. Abesifazane kuqashelwe ukuthi isisindo elahlekile kube lula kakhulu futhi ngokushesha kunanoma inini ngaphambili ngaphandle kwalo. Nokho, kuyaqapheleka ukuthi ukusetshenziswa kuphela ithuluzi kwesisindo akwanele. Umuthi zizosebenza, uma uzama ukugcina lesifanele yokudla, umsebenzi kanye nokuphumula.
Kulesi sihloko esiye sazama ukuthola uma oluhlaza ikhofi kahle "Evalar" isisindo ukulahleka. Uphenyo abathengi bathi kuyasiza ngempela ngokushesha futhi kalula ubuyele ulahlekelwe isisindo.
Indlela ukususa Windows Media Centre kusuka kwikhompyutha yakho?
Imiyalelo kanjani wenza ikhalenda e "uLizwi"
Butterfly kanzashi ngezandla ngamaminithi angu-30